Iyiphi i-TV engamasentimitha angama-65 okufanele uyikhethe? Ukuthengwa kwe-65 inch TV | allans.pl
Iyiphi i-TV engamasentimitha angama-65 okufanele uyikhethe? Ukuthengwa kwe-TV engamasentimitha angama-65
Ukubukwa okungu-7.90K 27 Agasti 2020 I-RTV nemishini yasendliniyini-TV ithelevishini ukuthengwa kwe-TV
ylyana3.82K	 31 May 2018 0 Amazwana
Singathanda ukuthenga i-TV engamasentimitha angama-65. Njengamanje sinamasentimitha angama-55, kepha sihleli kude ne-TV njengoba sinekamelo elikhulu lokuphumula futhi umbhede ngakolunye uhlangothi, i-TV ngakolunye uhlangothi.
Iyiphi i-TV engamasentimitha angama-65 ongayincoma? Noma ubani kini une-TV engama-intshi angama-65?
engaziwa uphendule umbuzo 27 Agasti 2020
allans8.16K Kungezwe: Meyi 31, 2018
anette230	 Kuthunyelwe ngoJuni 15, 2018	 0 Amazwana
Phendula ku: Iyiphi i-TV engamasentimitha angama-65 okufanele uyikhethe? Ukuthengwa kwe-TV engamasentimitha angama-65
Mina nomyeni wami sisanda kuthenga i-TV SONY KD-65XE8577 futhi sijabule kakhulu ngayo. Ngokuqondene negumbi lethu lokuphumula nokuhleleka kwefenisha ekulo, lobungako be-TV busifanele. Lapha, bamba isixhumanisi sentambo mayelana nale TV: https://allans.pl/p/telewizor-sony-kd-65xe8577-opinie/
anette uphendule umbuzo 15 Juni 2018
Gistf1.91K	 Kuthunyelwe ngoJuni 18, 2018	 0 Amazwana
Ngisanda kuthenga le TV engamasentimitha angama-65:
I-TV engama-intshi angama-65
Ngiyale online futhi ngosuku lwesibili ekhaya. Uma kunesidingo, ungavula, azikhonzi lapho.
Inekhwalithi yesithombe esingeziwe, isikhathi sokuphendula esisheshayo, ezemidlalo noma imidlalo kuyiphupho kuleli gem. Futhi ngentengo ikhokhele ngempela.
Ngikweluleka ngokulwa nosony, eminyakeni emithathu uzothatha indawo yesony ufake entsha. Futhi lapha ungaqiniseka ngeminyaka eminingi yokusebenza.
Uzothola ama-TV angama-intshi angama-65 eshibhile nge-PLN 2000-3000 kunalokhu, kepha uma ubona ukuthi ukukhanya kubonakala kanjani esikrinini nokuthi kwehla kanjani, uzoqonda ukuthi kungani kufanelekile ukukhokha ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, esitolo emashalofini, izinto eziningi azibonakali futhi asikho isidingo sokuholwa yilokho okubonayo esitolo. Lapho balungiselwe ukukhanyisa ukwenza yonke into ibukeke yinhle.
Gistf uphendule umbuzo 18 Juni 2018
sudokai3.26K	 Kuthunyelwe ngoJulayi 6, 2018	 0 Amazwana
Umfowethu ubethenga i-TV engamasentimitha angama-65 ngameluleka. Kudala sicwaninga imakethe, yiziphi izinhlobo ezitholakalayo, ngamanani entengo, nokuthi imiphi imisebenzi.
Ekugcineni sayala le-TV engama-intshi angama-65 lapha:
IPhilips 65 intshi TV
Une-4K lapha, kunjalo, une-smart tv eshesha kakhulu futhi enembile, okusho i-android. Izokudlalela wonke amafayela akule TV ongaphupha ngayo. Unezixhumi ezi-4 ze-HDMI, nginezingu-3 ku-TV yami futhi kwesinye isikhathi kufanele ngixhume into eyodwa futhi nginqamule enye. Izixhumanisi ezi-4 inani eliphelele.
Izipikha nazo zinamandla futhi ikhwalithi yomsindo iyanelisa kakhulu.
allans Impendulo ehleliwe I-12 December 2018
ukugcoba1.44K	 Kuthunyelwe ngo-Agasti 10, 2018	 1 amazwana
Bengingeke ngithenge ama-philips endaweni yakho, ikakhulukazi enkulu.
Kusukela kuma-TV amakhulu angama-intshi angama-65, i-Samsung, i-LG ne-Thomson, ngokwazi kwami, kusebenza kahle kakhulu. Le TV engamasentimitha angama-65 muhle kakhulu:
65 intshi Thomson TV
Uma uqhathanisa intengo nemingcele yale TV namanye ama-intshi angama-65, uzobona ukuthi lena iyanqoba.
Ukube bengingathenga i-TV engama-intshi angama-65 manje, yilokhu engingaku-oda. Ikakhulu ngoba lesi sitolo mhlawumbe esishibhile futhi, ngaphezu kwalokho, zihlala zipakisha kahle futhi zithumela ngokushesha (njengazo zonke izitolo ezibucayi kulezi zinsuku).
Une-Android TV lapha, i-4K, umehluko owengeziwe, i-netflix, amachweba ama-3 HDMI, i-HDR. Ngamanani kuyisimangaliso ngempela.
engaziwa Wengeze ukuphawula okusha 1 January 2019
I-TV 65 kuphawula 1 January 2019
Ngine thomson, kodwa encane. Manje ngizobe ngithenga i-TV engama-intshi angama-65 futhi ngicabanga ukuthi ngizokulingwa yile Thomson. Ngijabule kakhulu. I-thomson yami icishe ibe neminyaka engu-4 manje sengiyinika umama futhi mhlawumbe izomphinda kabili kunaye.
ngaphandle kwalokho bengizokwenza1.47K	 Kuthunyelwe ngo-Okthoba 4, 2018	 0 Amazwana
Ngingancoma i-TV efanayo ne-Hughes. Thenga kulungile futhi.
UThomson wenza imishini emihle futhi ngentengo yama-intshi angama-65 we-led, i-4K, i-android TV, i-HDR kuyiphupho. Konke kuzobukeka kukuhle kule sethi ye-TV futhi kuzokusebenzela iminyaka.
ngaphandle kwalokho bengizokwenza uphendule umbuzo 4 Okthoba 2018
i-tvcop (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoNovemba 18, 2018	 0 Amazwana
Kuyafaneleka ukubheka ukuthi ngabe uyawadinga ngempela amasentimitha angama-65, nokuthi, ngokwesibonelo, amasentimitha angama-55 akwanele yini kuwe. Uma uhleli eduze kwesikrini esikhulu, akumnandi nokubuka. Kufanele ulungise usayizi we-TV egumbini. Uma une-TV engamasentimitha angama-65, kungcono ukuhlala okungenani amamitha ayi-2.5 ukusuka kuyo, noma amamitha ama-3.
ibhokisi le-tv uphendule umbuzo 18 Novemba 2018
uLouis xv610	 Kuthunyelwe ngoNovemba 18, 2018	 2 Amazwana
Ngine-TV engamasentimitha angama-65, ngisanda kuyithenga. Ngithenge le modeli lapha:
I-Samsung 65 intshi TV
Bathumele ngokushesha besesimweni esihle, ngisho nokuklwebheka bekungekho ebhokisini.
Mhlawumbe uyazibuza ukuthi kungani ngikhethe le TV engamasentimitha angama-65 hhayi enye. Ukukhetha kwakunzima, kunama-TV amaningi kakhulu angama-intshi angama-65 ukuthi udinga ngempela ukuchitha isikhathi esiningi ukuthola okulungile.
Ngichithe isikhathi esiningi.
Kungani ngikhethe le, ngaphandle kokusobala, isb.amapharamitha amahle maqondana nentengo?
Yebo, ngoba le TV inemodi yokudlala ethuthuke kakhulu (futhi ngiyadlala). Ine-4K (lokhu sekujwayelekile), i-HDR, Ukugqama kweMega, Ukufiphala kwe-UHD.
Ubuchwepheshe beDynamic Crystal Colour buwenza ngempela umsebenzi wawo, abufani ne-TV ejwayelekile.
Ukubuka ama-engeli ngokunokwenzeka okubanzi kakhulu. Futhi alukho uhlaka olubonakalayo - kuyangicasula ukuthi amafreyimu abonakala kanjani azungeze ama-TV.
Ngaphezu kwalokho, amasokhethi e-HDMI enziwe ngezinto ezinhle, futhi noma eyodwa yephuka, lokho kunganele. Iprosesa inamandla, ngakho-ke futhi ungapheqa ngokushesha i-inthanethi kuyo (ngiyibhekile futhi kunjalo ngempela).
Umshayeli wendiza ongajwayelekile, isizukulwane esisha sabashayeli bezindiza.
Angikwazi ukukhetha i-TV engcono engama-intshi angama-65. Amatshe we-Samsung UE65NU8002T.
iga23 kuphawula I-12 December 2018
Abazali bami babesanda kuthenga iSamsung kanjalo nobaba wami, lapho efika kuye ezinsukwini ezimbalwa zokuqala, wahluleka ukususa amehlo akhe kule TV 🙂
Ngokukhululekile kuphawula 1 January 2019
Nginayo le samsung kusukela ekuqaleni kukaDisemba. Ngakhokha okuningi kakhulu ngaleso sikhathi, manje kushibhile. Sekukonke, cishe ngeke uthole i-TV engcono yale ntengo. Kuyashesha, kuthokomele ukulawula okukude, isithombe esihle kwezemidlalo, kuma-movie nakumageyimu. Ungaxhuma yonke into ngekhebula, noma uxhume umusho wakho nge-smartphone.
lauks (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoDisemba 12, 2018	 0 Amazwana
Ukube bekufanele ngithenge i-TV engamasentimitha angama-65 manje (ngiyithengile, kodwa ngonyaka odlule), bengizothenga iPhilips TV engama-intshi angama-65 kwasekuqaleni, iSudokai ebhala ngayo. Endaweni yesibili bengizothenga le Thomson 65 inch ngenxa yamanani aphansi lapho kulesi sitolo naku-android tv.
Manje sekukhona ukukhethwa okukhulu kakhulu kwama-TV angama-intshi angama-65, njengoba ngithenge bekukuncane kakhulu futhi kuyabiza.
Ngithenge eyami online, angiyithengi ezitolo. Umngani wami usebenze ezitolo eziningi ze-RTV kuze kube manje futhi uhlale engeluleka ukuba ngi-ode online, ngoba ezitolo khona lapho kwenzeka izinto eziningi ezixakile, kwesinye isikhathi azimnandi neze izimpahla lapho 🙂
ukuhleka uphendule umbuzo I-12 December 2018
concypuje (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoDisemba 12, 2018	 0 Amazwana
Nginayo le Samsung uLouis xv abhala ngayo ngenhla. Ngiyithengile ngenetha cishe ezinyangeni ezi-2 ezedlule. Weza ngokushesha okukhulu, esimweni ephelele sha sha.
Isebenza kahle kakhulu emidlalweni ye-xbox eyodwa, ngicabanga ukuthi i-ps4 nayo izokwenza kahle.
Imidlalo yinhle ukubukwa, abangani bami beze ukuzobuka imidlalo emibili muva nje 🙂
Ngijabule ngokuthengiwe, kepha umkami akathokozi, ngoba ngichitha isikhathi esiningi kakhulu phambi kwe-TV, ngingamnaki 🙂 Kepha futhi ubuka lolu chungechunge lwakhe futhi akakhonondi 🙂
ucabanga uphendule umbuzo I-12 December 2018
iga23780	 Kuthunyelwe ngoDisemba 12, 2018	 1 amazwana
Muva nje, mina nomlingani wami sibhekane nenkinga okufanele sikhethe i-TV engamasentimitha angama-65. Sithuthele efulethini elisha elinekamelo lokuhlala elikhulu kakhulu futhi besifuna nje ukuthenga ama-intshi angama-65. Angazi nami uqobo, kepha umlingani wami wakwenza futhi sayithenga le TV, ngezansi ngizobhala ukuthi kungani:
Umlingani wami usevele utshele abantu abaningi ukuthi kungani le foni, ukuthi konke ngikwazi ngekhanda 🙂
Okokuqala, inesikrini se-OLED futhi lezi zikrini zingcono kakhulu - imibala emihle kakhulu, umehluko.
Okwesibili - umsebenzi we-ambilight uletha isimo esihle kakhulu.
Kunezindlela eziningana - imidlalo, indawo yokuphumula, umculo wasebhayibhelini njll.
Kukhona ama-Gigabyte ayi-16 futhi ungaxhuma idrayivu yangaphandle ye-USB ku-TV.
Kunokufakwa okungu-4 HDMI (imvamisa kuba no-2 noma 3 kwamanye amasethi we-TV - noma ngabe elinye liphuka, kusala amanye ama-3) Okokufaka okungu-2 kwe-USB, okusho okujwayelekile.
Kukhona i-4K, i-P5 Perfect Engine Engine neminye imisebenzi emi-2 noma emi-3 ngesiNgisi engingasawakhumbuli amagama 🙂
Angikhumbuli ukuthi ngabe ngabhala yini, kepha i-android - ingcono kakhulu kune-smart tv.
Sijabule kakhulu ngale TV.
jarek alk kuphawula 1 January 2019
Ngibe nale philips amasonto ambalwa. Ngisanda kuyithenga kulesi sitolo.
Ngosuku olwandulela uNyaka Omusha wangenzela umuzwa wokuthi nginovalo lokuthi othile uzobuya ngelinye ilanga angintshontshele 🙂 Uma ngiya kwenye indawo, ngeke ngitshele muntu ngakho.
Isethi ye-TV inesithombe nomsindo omuhle kangangokuba ukuya ebhayisikobho kuyinto yesikhathi esidlule kimi.
I-France Elegance (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoJanuwari 1, 2019	 0 Amazwana
Nginekamelo elikhulu lokuphumula lapho i-TV engamasentimitha angama-65 ilungele khona. Eqinisweni, angazi ngalezi zimingcele zobuchwepheshe, kepha ngaphambi kokuthenga, ngifunde kancane ngakho futhi ngaqhathanisa amamodeli ahlukahlukene ku-Intanethi. Ekugcineni, nginqume nge-Samsung. Ngeshwa, angikhumbuli imodeli, kepha kubonakala ngathi iyafana noLouis xv onayo. Okungenani ibukeka ifana futhi inamapharamitha afanayo. Ngijabule kakhulu ngokuthenga kwami.
Ubuhle beFrance uphendule umbuzo 1 January 2019
advix220	 Kuthunyelwe ngoJanuwari 1, 2019	 0 Amazwana
Uma ngingaphutha, akekho noyedwa oke washo i-LG TV ngobuchwepheshe be-nano cell lapha. Nginayo eyodwa futhi bengingeke ngiyishintshele enye. Abangani bami banama-TV ahlukile, kepha akekho onesithombe esihle njengami. AmaKorea azamile ukusebenzisa le modeli. Ngithenge lapha:
Isethi ye-LG 65 inch TV
Ngibuka kakhulu nge-USB futhi le TV isebenza kahle. Imidlalo ibukeka sengathi ngiyakhohlwa ukuphefumula kwesinye isikhathi ????
Ngokwazi kwami, usesimweni esihle impela, ngifisa sengathi ngabe wayekhona ngaleso sikhathi.
Benze ifreyimu kamnandi kuyo, awusoze wayibona nhlobo.
Futhi ngiyajabula ukuthi ngithenge i-intshi engama-65 - wonke umuntu ungitshele ukuthi izokuba nkulu kakhulu, futhi akunjalo neze.
allans Impendulo ehleliwe 14 May 2019
AmaMoor (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngo-Ephreli 11, 2019	 0 Amazwana
Uma unegumbi elingaphezulu kwe-28 m2, ngincoma impela i-TV engama-65-intshi. Ngino-28 m2 nje, ngathenga ama-intshi angama-55, kepha uma ngihlala phansi futhi le TV iqhele ngamamitha ambalwa, ingaba ngamasentimitha angama-65 kalula. Ungabona konke kahle futhi kumnandi, kepha ngifisa sengathi ngabe ngithenge ama-intshi angama-65 kancane. Esikhathini esedlule, egumbini elingu-20m2, nganginamasentimitha angama-43 futhi kwakubonakala kukuncane kimi futhi ngacabanga ukuthi uma ngigxumela kuma-intshi angama-55 kuzolunga.
AmaMoor uphendule umbuzo 11 April 2019
i-sawmill (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoMeyi 14, 2019	 0 Amazwana
Muva nje, ngibone i-TV engama-intshi angama-65 esitolo futhi ibihlaba umxhwele. Ngikucabangisisa kahle ukuthengwa, ngisezinhlelweni zokufuna indawo yokuhlala, onke anamagumbi amakhulu okuhlala futhi i-TV enjalo ingasebenza. Umngani wami wakha indlu wazithengela ama-intshi angama-65 futhi kuhle ukubheka. Uhlala kude impela ubona konke kahle.
umshini wokusaha izingodo uphendule umbuzo 14 May 2019
othandekayo (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngoMeyi 14, 2019	 0 Amazwana
Ngeke ngincome imodeli ethile ye-TV engama-intshi angama-65 kuwe, ngoba kunamamodeli amaningi amahle (kepha hhayi wonke afanele ukuthenga, kukhona ama-TV angcono futhi amabi kakhulu angama-intshi angama-65).
Lapha unohlu oluhlungiwe - onke amamodeli apholile. Mina uqobo ngi-odole i-TV engama-intshi angama-65 lapha cishe emasontweni ama-2 edlule, eyesibili ohlwini.
Ama-TV angama-intshi angama-65 - amamodeli angcono
Zonke zinokufakwayo okungu-4 kwe-HDMI (mhlawumbe okungu-4). Zonke zinesici sokurekhoda se-USB (isici esiwusizo kakhulu kimi). Zonke zingokwemvelo maqondana nokusetshenziswa kwamandla.
I-Samsung, LG, Sony, Philips TV zikulolu hlu. Angiyena umsekeli womkhiqizo owodwa, ngihlala ngibheka imininingwane yezobuchwepheshe hhayi i-logo. Lapha, abakhiqizi abaningi babukisa.
Vele, wonke lawa ma-TV ane-4K, ejwayelekile kuma-TV amakhulu kangaka.
Lovely uphendule umbuzo 14 May 2019
ithangi650	 Kuthunyelwe ngoMeyi 25, 2019	 0 Amazwana
Ngine-TV evela kulolu hlu, ebhalwe ngaphezulu ku- "lovely".
I-TV yokuqala kulolu hlu - i-samsung. Ngiyalile online, bayithumela mhlawumbe ezinsukwini ezi-2. Sengibe nale TV isikhathi esingangenyanga.
Inemisebenzi eminingi yokuthuthukisa ikhwalithi yesithombe (ngaphandle kwe-QLED ebaluleke kakhulu) - I-Ultimate UHD Dimming, i-Ambient Light Sensor, i-Wide Viewing Angle, i-Quantum Dot, i-Quantum HDR Enhanced Contrast, i-Quantum 4K Processor, i-FreeSync Technology, i-4K Ultra HD Certified Certification.
Ungakwazi ukulawula izwi lakho, ithebhulethi, i-smartphone. Kukhona ukuqoshwa kwe-USB. Usayizi we-TV engama-intshi angama-65 ulungele igumbi lami lokuphumula. Into enhle angizange ngiyithenge encane. Ngangiseduze nokuthenga I-TV engama-intshi angama-55kepha-ke ngabe incane kakhulu.
ithangi uphendule umbuzo 25 May 2019
Fart (isivakashi)	 Kuthunyelwe ngo-Agasti 27, 2020	 0 Amazwana
Uma ufuna ukuyithenga eshibhile kepha ipholile, thatha iPhilips 65 inch TV. I-Ambilight inika umphumela omangazayo, udinga kuphela ukuba nomhlane wodonga ukwenza le nkazimulo icabange ngayo.
Ngikweluleka ukuthi u-ode ngokushesha ngokuletha nokusetha i-TV, ngoba iyinkomo enkulu impela futhi kunzima kakhulu ukuyisungula. Ngangesaba kakhulu ukuthi ngizolimaza i-matrix lapho ngiyifaka odongeni lwodonga.
Fart uphendule umbuzo 27 Agasti 2020
allans8.16K Kungezwe: Agasti 27, 2020
Bhalisa noma Zaloguj się
Isiqandisi SAMSUNG RB38T650ESA Nofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Iziqandisi ze-Hisense - ukubuyekezwa mayelana neziqandisi ze-Hisense Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Iziqandisi zeHaier - ukubuyekezwa kweziqandisi zeHaier Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Isiqandisi HAIER HTR3619ENPW Nofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Isiqandisisi LG GBF567PZCMB Nofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
I-HISENSE RB438N4GB3 isiqandisi iNofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Isiqandisi BEKO RCNE560E40ZLXPHUN HarvestFresh HygieneShield Nofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Isiqandisisi SHARP SJ-BA22IHXWE-EU Nofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Isiqandisisi LG GBB62SWFFN Nofrost - izibuyekezo Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Ngabe udokotela we-endocrinologist anganikeza amaphilisi wokulawula ukubeletha? Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Ngabe udokotela we-endocrinologist angakhipha ikhefu lokugula? Izimpendulo eziyi-0 | 0 amavoti
Bona okufakiwe okufana ne- Iyiphi i-TV engamasentimitha angama-65 okufanele uyikhethe? Ukuthengwa kwe-TV engamasentimitha angama-65
I-Samsung QE65Q80TAT TV - izibuyekezo
Yini okufanele uyibheke lapho uthenga isiqandisi?
I-Samsung UE40M5002 TV - izibuyekezo
Yini iSony 65 inch TV?
I-Philips 65 inch TV - izibuyekezo (iziphi okufanele uzithenge?)
I-LG 49SM8600 TV - imibono / isibuyekezo
TV PHILIPS LED 65PUS6412 - izibuyekezo
Linganisela usizo lwentambo Iyiphi i-TV engama-intshi angama-65 ongayikhetha? Ukuthengwa kwe-TV engamasentimitha angama-65
(10 amavoti, isilinganiso: 5,00 5 kwezingu-XNUMX
Ingabe intambo Iyiphi i-TV engamasentimitha angama-65 okufanele uyikhethe? Ukuthengwa kwe-TV engamasentimitha angama-65 ingabe ikuthinta wena, inkampani yakho, ukuzalanisa, umkhiqizo noma elinye ibhizinisi?
Yimuphi umqapha we-intshi engu-27 ongasebenza nayo Ukuqapha okuhle
I-ASUS R700VJ-T2120H laptop - imibono / ukubuyekeza